घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू गेब्रियल बार्बोसा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
एलबीले उपनाम संग फुटबल प्रतिभा को पूर्ण स्टोरी प्रस्तुत गर्दछ "गेबिगोल"। हाम्रो गेब्रियल बार्बोसा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ।
गेब्रियल बार्बोसाको जीवन र उदय। छवि क्रेडिट्स: इन्स्टाग्राम र डेलीमेल।
हो, सबैलाई आफ्नो गोल-स्कोरिंग फारम र प्राविधिक सीपहरूको बारेमा थाहा छ। जहाँसम्म, केवल केहि थोरैले गेब्रियल बार्बोसाको जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
गेब्रियल बार्बोसा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
फर्वार्ड प्लेमेकर गेब्रियल बार्बोसा अल्मेडा ब्राजिलको साओ पाउलोको बाहिरी भागमा साओ बर्नार्डो डो क्याम्पो नगरपालिकामा अगस्त 30 अगस्तको 1996th दिनमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नी आमा, लिन्डल्भा बार्बोसा र उनका बुबा, वाल्डेमिर बार्बोसामा जन्मेका दुई छोरा मध्ये पहिलो हुनुहुन्छ। हेर, गब्रिएल बार्बोसाका आमा बुबाको तस्वीर उनीहरूको मिलनको समयमा।
गेब्रियल बार्बोसा अभिभावक वाल्डेमिर र Lindalva। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
पोर्तुगाली परिवारको जराको साथ ब्राजिलियन राष्ट्रियताको आश्चर्यजनक फुटबलर मोन्टान्होको छेउछाउको एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्काइएको थियो, जहाँ उनको जन्म नगरपालिकामा उहाँ आफ्नो कान्छी बहिनी, दिवोभना बार्बोसासँग हुर्कनुभयो।
मोन्टान्होमा हुर्किसकेका युवा गेब्रियलको फुटबल-मायालु बचपन थियो जुन छिमेकमा बारम्बार हुने हिंसाले विरक्त हुन्छ। अशान्ति कहिलेकाँहि अत्यन्त गम्भिर थियो कि छेउछाउको बन्दुकको गोलीले अराजक तालले तत्कालीन सानो छोरा र उसका आमा बुबालाई टेबुल र सोफाको मुनि सुरक्षाको लागि बदमाश पठायो।
मोन्टान्होको छेउमा हुर्किएपछि युवा गेब्रियलको फुटबल-मायालु बचपन थियो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
गेब्रियल बार्बोसा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
जब पनि गेब्रियल टेबल वा सोफा मुनि थिएन ऊ सडकमा उत्रियो जुन उसको उमेरका बच्चाहरू जस्तै फुटबल खेल्न थाल्छन्। आफ्नो परिवारको मायालु सहयोग पाएर गेब्रियलले फुटसल भन्ने इनडोर फुटबल खेलको बारेमा प्रशिक्षण दिन थाले। धेरै समय पछि त यो 8- वर्ष पुरानो उसको घर क्लब कनिष्ठ साइड साउ पाउलो को लागि प्रतिस्पर्धी फुटस्सल खेल मा विशेषता शुरू गर्न को लागी शुरू भयो।
सान्तोसको बिरूद्ध एक शुभ खेलको दिन, गेब्रियलले तारकीय कला प्रदर्शन गरे जसले सन्तोको पौराणिक कथा जीटोलाई खुशी पारे। यसैले गेब्रियललाई सान्टो एफसीको युवा प्रणालीहरूमा सामेल हुन आमन्त्रित गरियो जहाँ उसले आफ्नो प्रारम्भिक क्यारियरको राम्रो हिस्सा आफ्नो नजिकको साथीसँग खेल्छन्। नेमार जूनियर
सान्टोस एफसीमा युवा फुटबल दिनहरूमा युवा गेब्रियल बार्बोसा र नेमार जूनियरको एक दुर्लभ तस्बिर। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
गेब्रियल बार्बोसा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
सान्टोसमा छँदा, गेब्रियल चम्किरहे जब उनी क्लबको युवा वर्गबाट ​​निस्केका थिए। जबसम्म गेब्रियल क्लबसँग उनको आठ-बर्ष पुगे, उनीसँग 600 गोल र गन्ती भन्दा कमको आश्चर्यजनक रेकर्ड थियो। यस्तो अद्भुत प्रशंसनीय फारमले गेब्रियललाई "गेबिगोल" उपनाम प्राप्त गर्‍यो र उनलाई ब्राजिलको जुनियर पक्षमा पनि सुरक्षित गर्‍यो।
गब्रिएलको क्रेडिटमा ठूलो धम्की पछि, सान्तोसका तत्कालीन कोच, मरीसी रामाल्होले गेब्रियललाई क्लबको वरिष्ठ पक्षसँग प्रशिक्षण सुरु गर्न आमन्त्रित गरे। सान्तोस एफसीले गेब्रियललाई 50million long को दीर्घकालीन सौदासँग बाँधे र खुसीसाथ उनले आफ्नो फारम बनाए जब उनले 16-वर्ष पुरानो रूपमा डेबिट गरे पछि खुशी थिए।
गेब्रियल बार्बोसा 16 वर्षको थिए जब सान्टोसले उनलाई 2013 मा आफ्नो पहिलो व्यावसायिक करार दिए। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
गेब्रियल बार्बोसा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकमा फेम स्टोरी
2016 गेब्रियलका लागि राम्रो र खराब खेलकुद वर्षको मिश्रण थियो। राम्रोसँग सुरू गर्न, उनले रियो एक्सएनयूएमएक्सको लागि ब्राजिल ओलम्पिक टीममा सम्मिलित हुन कल प्राप्त गरे र अन्डर-एक्सएनयूएमएक्स पक्षलाई उनीहरूको इतिहासमा पहिलो पटक स्वर्ण पदक जित्न मद्दत गरे। ओलम्पिक खेलपश्चात, गेब्रिएलले इन्टर मिलनमा सर्न सके जहाँ उनले आफ्नो खुट्टा खोज्न व्यर्थ संघर्ष गरे।
गेब्रियलको नराम्रो फार्मका कारण इन्टरनेसनले इन्टर मिलानले उनलाई बेनफिकामा edण दिए जहाँ उनको संघर्ष जारी छ। इटालीको गेब्रियल ट्राभेलको शिखरमा, प्रशंसक र पत्रकारले उनीमाथि धेरै आलोचनाको बारिश गरे जसले आफू बढि वजन भएको र उनको उपनाम "गाबिगोल" को अयोग्य महसुस गरे जुन लामो गोल स्कोरको लागि खडा भयो।
इन्टर मिलान र बेनिफिकामा गेब्रिएल बार्बोसा प्रभावित गर्न असफल भएपछि उसलाई एक खेलाडी कम महसुस भयो भने धेरैले आफू बढी तौल भएको कुरा बताए। छवि क्रेडिट: फोरफोर टु।
गेब्रियल बार्बोसा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
अन्ततः गेब्रिएललाई उनको बाल्यकाल क्लब सान्टोसमा edण दिइयो जहाँ उसले एक्सएनयूएमएक्स गोलको साथ ब्राजिलिरियोको 2018 / 2019 संस्करणमा शीर्ष स्कोरर बनेर आफूलाई छुटकारा दियो। "घर मीठो घर" गेब्रियल अक्सर चिच्याए किनभने उनले आफ्नो मोजो कसरी फेला पारे भनेर बुझ्न नसक्दा।
गेब्रियल बार्बोसाले सान्टोस एफसीमा आफूलाई प्रशस्त गोल स्कोरिंग फारमका साथ मुक्त गरे जसले उनका आलोचकहरू बन्द गरे। छवि क्रेडिट: यूट्यूब।
अगाडि लेख्ने समयमा हो, फ्लेमेन्गो एफसीको लागि loanणमा खेल्दै जहाँ 34 उपस्थितिहरूमा 40 गोलहरू छन्! बढी के? गेब्रियलले प्रिमियर लिग साइड लिभरपूल एफसीको लागि खेल्न रूचीहरू दर्साएको छ। यद्यपि त्यहाँ नियोजित चालको वरिपरि अनिश्चितताका शीर्षकहरू छन्, जुनसुकै पनि फुटबल ग्याब्रिएलले आफूलाई फेला पारे पनि इतिहास हुन्छ।
गेब्रियल बार्बोसा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
गेब्रियलको व्यस्त फुटबल कार्यक्रमबाट टाढा, उनीसँग एउटा रमाइलो प्रेम जीवन छ जुन उनले नेमारको रगत बहिनी - राफेला सान्तोससँग पहिचान गरेको देखेको छ। 2017 मा राफेला डेटि began गर्नुभन्दा अगाडि अगाडी सार्वजनिक सार्वजनिक प्रेमिका भएको थाहा छैन।
तिनीहरू अलग तरिकामा जानु भन्दा पहिले केही महिनाको लागि मिति तय गर्‍यो तर अप्रिल 2019 मा पुरानो ज्वालाहरू पुनः जगायो। कुनै पनि प्रेम चराहरुको छोरा वा छोरीको विवाह भन्दा बाहिर छ जबकि उनीहरूको सम्बन्ध को प्रशंसकहरु आशा गर्छन् कि जोडी चाँडै सगाई गरी अर्को स्तर मा लिन्छ।
गेब्रियल बार्बोसा रोमान्चक रुपमा नेमार जूनियरको प्रेमिका राफेला सान्तोसको साथ संलग्न छन्। छवि क्रेडिट: TheSun।
गेब्रियल बार्बोसा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन तथ्य
यसले परिवारलाई गब्रिएल जस्ता प्रशस्त स्ट्राइकर बनाउनको लागि लिन्छ। हामी तपाईंको लागि गब्रिएलको पारिवारिक जीवनको बारेमा तथ्यहरू उसको आमा बुबाआमाबाट ल्याउँदछौं।
गेब्रियल बार्बोसाका बुबा र आमाको बारेमा: Lindalva र Valdemir बारबोसा क्रमशः गेब्रियलका आमा र बुबा हुन्। सानो परिवारका आमाबुवाहरूले गब्रिएललाई सानै उमेरमा फुटबलको परिचय दिएका थिए र कहिलेकाँही पैसा edण लिएका थिए भने प्लेमेकरलाई फुटबल प्रशिक्षणको लागि जान सक्षम बनाउन। तिनीहरू गेब्रिएल के भएकोमा गर्व गर्छन् र प्राय: उसको जीवनको फोटोहरू उनीहरूको सोशल मिडियामा उनको कथा बताउन प्रस्तुत गर्दछन्।
गब्रिएल बार्बोसाका आफ्ना बुबाआमासँग दुर्लभ बचपनका फोटोहरू। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
गेब्रियल बार्बोसाका भाई बहिनीहरूको बारेमा: गब्रिएलको कुनै भाई छैन तर कान्छी बहिनीलाई डिवोभना बार्बोसा भनेर चिनिन्छ। Dhiovanna एक विदेशी भाषा सिक्न चासो राख्ने एक इन्स्टाग्राम मोडेल हो। उनी आफ्नो जेठो भाई गब्रिएलसँग अत्यन्त नजिक छिन् कि उनले उनलाई ट्याटू सम्झाउँछन् कि उनी सधैं टाढा नै रहेकी भए पनि उनी संसारको चारै तिर यात्रा गर्छन्।
गब्रिएल बार्बोसा आफ्नो बहिनी संग। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
गेब्रियल बार्बोसाका आफन्तहरूको बारेमा: गब्रिएल बार्बोसाको पुर्खा र विस्तारित पारिवारिक जीवनको बारेमा, आफ्ना बुवा हजुरबा हजुरआमा हजुरआमाको बारेमा थोरै मात्र जानकारी छ जबकि लेखमा उनको हजुरबुबा र हजुरआमाको पहिचान हुन सकेन। त्यस्तै गरी, त्यहाँ प्लेमेकर काका, काकी र काकी का कुनै रेकर्ड छैन जबकि लेखन को समय मा उसका भतीजा वा भतिजा छैन।
गेब्रियल बार्बोसा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
व्यक्तित्व गुणहरू जसले गेब्रियल बार्बोसा परिभाषित गर्दछ कन्या राशि चिन्हको हो। तिनीहरू कृपा, सद्भाव, प्रतिस्पर्धा, र रचनात्मकता को लागी उनको उपज शामिल छन्। थप रूपमा, गेब्रियल एक पूर्णतावादी व्यक्तित्वको स्वामित्व राख्दछ र मध्यम रूपमा आफ्नो निजी र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा विवरणहरू प्रकट गर्दछ।
गेब्रियलका रुचिहरू र शौकहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस् उहाँसँग धेरै मनोरञ्जन गतिविधिहरू छन् जसमा संगीत सुन्ने, गाउने, पौंडी खेल्ने, सुन्दर समुद्र तटहरूको भ्रमण गर्ने र आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग गुणस्तरीय समय बिताउने समावेश छ।
गेब्रियल बार्बोसालाई पौडी खेल्न र बिचमा समय बिताउन मन पर्छ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
गेब्रियल बार्बोसा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली तथ्य
जे होस् गेब्रियल बार्बोसाको बजार मूल्य लेख्ने क्रममा € 23.00 मिलियन डलर हो, उसको कुल सम्पत्ति अज्ञात छ किनकि यसैले उसले डिसेम्बर 2019 मा ज्याला र तलबमा थोरै आर्जन गरेको छ।
नतिजाको रूपमा, गेब्रियल प्राय: उपलब्धि खेलाडीहरूको विलासी जीवनशैली बाच्दैनन् जुन महँगो घरहरू छन् र विदेशी कारहरूमा सवारी गर्छन्। यद्यपि उनीसँग एउटा राम्रो कन्भर्टेबल कार छ र विश्वभरका महँगो रिसोर्टहरूमा छुट्टि कसरी खर्च गर्ने जान्छ।
गब्रिएल बारबोसा आफ्नो सभ्य रूपान्तरण कारमा यात्रा गर्दै। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
गेब्रियल बार्बोसा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
हाम्रो गेब्रियल बार्बोसा बचपन कथा र जीवनी यहाँ सम्मिलित गर्न कम ज्ञात वा अनौंठित तथ्यहरू छन् जुन सायद उसको बायोमा समावेश गरिएको छ।
धुम्रपान र मदिरा: गेब्रियल बार्बोसा धूम्रपानको लागि दिइएन, न त उनी कडा पेय पदार्थको घाउमा रमाईएको पाइएको छ। प्लेमेकर बरु मन र शरीरमा राम्रो स्वास्थ्य हुनुमा केन्द्रित छ किनकि उसले शीर्ष फ्लाईट फुटबलले प्रस्तुत गर्ने चुनौती लिन तयार गर्दछ।
ट्याटूहरू: सम्भवतः खेलकुदको इतिहासमा सबैभन्दा टाटुएको फुटबलरमध्ये एक, गब्रिएलको पछाडि, हात, खुट्टा र घाँटीमा शरीर कला छ। ट्याटुहरूको बीचमा उल्लेखनीय यसको आमा बुबा, बहिनी र एक क्रूर मानेको साथ सिंहको छविहरू छन्।
गेब्रियल बार्बोसाको धड ट्याटूको दृश्य। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
धर्म: प्लेमेकर धर्मको बारेमा मुखर नहुन सक्छन् तर उनको ट्याटूज जसले येशूको प्रतिबिम्बित गर्दछ जुन उनको धार्मिक सम्बन्धको बारेमा आवाज बोल्दछ, क्याथोलिकताको पक्षमा विडम्बनाहरू।
के तपाईं गेब्रियल बार्बोसाको दाहिने बाहुमा येशूको तस्बिर देख्न सक्नुहुन्छ?
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो पढ्नको लागि धन्यबाद गेब्रियल बार्बोसा बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।